Pun Hlaing International Hospital – Thet Nandar
Posted on August 3, 2009 by Thet Nandar
Baby Heaven’s foot print
မာမီ ပထမဦးဆုံးရိုက်ပေးထားတဲ့ သားလေးပုံ
23 နေ့ သားလေးက သောကြာသား အစစ်ကြီးပေါ့ ။ ၇ပေါင် ၁ အောင်စ။ မမ Angel မွေးတုန်းကတော့7ပေါင်။ ဒီဓာတ်ပုံက သားလေး မွေးပီး ၁ရက်သားကလေး။ ၂၃ ရက်က မာမီက ဗိုက်ခွဲထားတာ ဆိုတော့ မထိုင်နိုင်သေးဘူးလေ။ ဟမ်းဖုန်းလည်း ပိတ်၊ အင်တာနက်လည်း ပိတ်ထား ဆိုတော့ ဒယ်ဒီက စိတ်ပူနေတာပေါ့နော်။ ၂၄ ရက်ကျမှပဲ မာမီက သားလေးကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပီး ဒယ်ဒီ နဲ့ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အီးမေလ်းပို့လိုက်တာ။
ပါးစပ် မပိတ်နိုင်လောက်အောင် ပြုံးပီးပျော်နေရတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ရက်စွဲပါ …
Single ViP Room : 75,000/Day
Suite Room : 165,000
Resident Doctor Care
Thet Nandar’s family
သားသားကို (Neonatal) မွေးကင်းစကလေးများ အခန်းမှာ ထားတာပေါ့နော်။ သားသားကော မာမီကော လက်မှာ ဆေးရုံက လက်ပတ်လေးတွေနဲ့လေ။ HRN No. ရေးထားတယ်။ ဒီ လှည်းလေးကတော့ သားသား အိပ်တဲ့ ကုတင်။ အောက်ထပ် အဆင့်မှာ Diper, sprit, wet tissue ၊အနှီးပိတ် ၊ ကလေး အကျီပါတယ်။ မာမီတို့ ကိုယ်တိုင် သားသားကို ကိုင်မယ်။ ချီမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီ အရက်ပျံ ဗူးလေးနဲ့ လက်ကို စွပ်ပီးမှ သားသားကို ကိုင်တာလေ။ ဒါကြောင့်လည်း ဆေးရုံမှာ ၄ ရက်အိပ်။ ၅ ရက်နေပီး ပြန်လာနိုင်တာပေါ့။ (ဒီနှစ် ၂၀၀၉ ကျတော့ မွေးကာစ ကလေးတွေကို ပြုစု စောင့်ရှောက်တဲ့ လူတိုင်း Mask တွေ ပါ ၀တ်ထားနေရပီ။) အဲဒါ မှန်ပါတယ်။ မွေးကာစ ကလေးအတွက် စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုရင် လူကြီးဆီက လေကနေတဆင့် ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကပ်ပါလာနိုင်တယ်လေ။ မွေးကာစ ကလေးကို နမ်းတောင် မှ မနမ်းရပါဘူး။ အဖြူရောင် အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ထွက်လာတတ်တယ်။ Dr. ရဲမြင့်ကျော် စာအုပ်မှာ ရေးထားတယ်။ မာမီလည်း သား နဲ့ သမီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက ဆယ်ကျော်သက် အရွှယ် နောက်ပိုင်းအထိ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်နည်း စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ တခု ခု မေးချင်လာ၊ သိချင်လာရင် yahoo answer မှာ သွားမေး ၊ ဖတ်တတ်နေပီလေ။
မာမီ ကုတင်၊ သမီး Angel ကုတင်
မာမီကုတင် (remote နဲ့လေ)
ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ဗီဒို၊ အလယ်က တံခါး၊ ညာဘက်က ရေချိုးခန်း
New Latt Generation
မမ Angel ပျင်းနေမှာ စိုးလို့ ကားတွန်းကား ကြည့်ဖို့ DVD အသေးစားလေးနဲ့ လတ် မျိုးဆက်သစ် သားသား ကောင်းစေလတ်။
ဆေးရုံဆင်းမယ့် ရက်မှာတော့ ဆရာ Dr. ဦးတင်မောင်အေး အတွက် လက်ဆောင်မုန့်ခြင်း ပေးချင်လို့ FMI city mart ဖုန်းနံပါတ်ကို အိမ်နားက စီးတီးမတ် ဆိုင်ခွဲကို ဖုန်းဆက် လှမ်းမေးလိုက်တော့ မာမီကို Angel မာမီမှန်းသိတော့ သူတို့ပဲ အစစ အရာရာ စီစဉ်ပေးတယ်။ City Mart က ပုံမှန်ဆိုရင် လက်ဆောင် ခြင်းတောင်း ၃တောင်း လောက် ၀ယ်မှ အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့တာပေါ့နော်။ ဆိုင်ခွဲက စီစဉ်ပေးလိုက်လို့ ၅သောင်း တန် လက်ဆောင် ခြင်းတောင်းက ပန်းလှိုင်ဆေးရုံက မာမီတို့အခန်းအရောက် လာပို့ပေးလို့ သားသားကို မွေးဖွားပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကို လက်ဆောင်ပေးရတာ အစစ အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်။ စီးတီးမတ်က ၀န်ထမ်းတွေက service charges လည်း မယူသလို delivery လည်း free.
သားလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အချိန်တုန်းက
သမီးလေးကို မွေးဖွားတဲ့ အချိန်တုန်းက ၊ နေရာ : SSC Hospital
Tags: Baby Henry, Birth, Hospital, My baby careCategories: Personal